Iplanethi yethu kancane kancane yagcwala udoti, esingeyena isikhathi alunge. Ungahlola futhi abathathi lutho, kodwa kukhona abantu abaqala usebenzise imfucuza impahla izinto ewusizo. Zenza izinto ezinhle kusukela amabhodlela ezingadingekile, amathayi kulahliwe, amashubhu iwayini amathini. Uma ubona ubuhle, abenziwe udoti njalo, futhi, ungathanda ukudala kulokhu kwaziswa abanye into yokuqala futhi eyingqayizivele!
Uma eduze nendlu yakho ngokungazelelwe "intende yesandla" we amabhodlela epulasitiki, kodwa akekho - ungamangali! It kuphela kusho ukuthi eduze uhlala qakala abantu kwemvelo ahlanzekile. Kodwa ukuze ukhule ube "ingadi", udinga impela kancane, okungukuthi isifiso sakho, izinto ngakwesokunene, kanye izandla zakho. Cabanga nje indlela bekungaba kuhle kanjani ukuba wena nabanye ukubheka into kahle eqalekako.
"Palma" amabhodlela, isigaba master esingajulisa manje ubambe, futhi ziyojabula, kubantu abadlulayo. Ngaphambi kokuthi uqale, kudingeka alungiselele into. Sidinga amabhodlela epulasitiki ngemibala emibili. usayizi Bottle eyonquma ukuma Ngokuzayo "intende yesandla". Ukuze emgwaqweni isihlahla kungcono ukusebenzisa umthamo 2 litre. Ukuze ekhaya "intende yesandla" ingasetshenziswa amabhodlela ka 0.5 amalitha.
Ngokwesilinganiso, isihlahla kufanele kube amabhodlela angu-20 nsundu "isiqu", kanye 8-12 izingcezu - ngokuba "amahlamvu". Kodwa nanka amasu ambalwa, futhi ngenxa yalokho inani lokugcina kuncike kuzo. "Palma" kusuka amabhodlela epulasitiki uthole "Fluffy" futhi wasekela, uma usebenzisa i-Internet njengendlela induku yensimbi. Kodwa suit nezinkuni. Thola igatsha kwesokudla - liqinile, nokunwebeka futhi abushelelezi. Kufanele kuvikelwe eya emthini kayiwanga. Ingasetshenziselwa salokhu isondo. Bheka enhle olandelayo ezimbili noma ezintathu emgqonyeni "intende yesandla".
Ebhodleleni cishe Midway asikwe kahle emgqeni amazombe. Kuyadingeka ukuthi siye waphenduka emakhoneni, ukuba goba kancane. Uma ibhodlela akuyona kakhulu, basebenzisa zombili izinhlangothi ibhodlela. Bangakwazi alternated, ukwenza indlela yokuphepha bedplate, entanyeni. Kodwa kungenye into ehluke kakhulu efanelekayo noma iyiphi ingxenye eyodwa, isibonelo phezulu, lapho kukhona kakade izimbobo ezidingekayo. Ukuze kulungiswe imininingwane owandulelayo "isiqu" ukuqala stringing nabo kwi induku. Futhi "intende yesandla" of amabhodlela epulasitiki kancane "ikhula" phezulu.
Isinyathelo esilandelayo ekulungiseleleni "amahlamvu". Thina uyonquma phansi amabhodlela oluhlaza. Khona-ke ukwenza 2 noma 3 kanye notch engakafiki entanyeni. ukusetshenziswa Cover njengoba isici fastener. Ukuze uthole "isihlahla" ezincane kuyoba okwanele 3-4 "intende yesandla" amahlamvu. Ukuze bathole eliphezulu "intende yesandla" of amabhodlela epulasitiki, amagatsha engenziwa kusuka amabhodlela 2 axhunyiwe ndawonye. Kodwa lokhu kuzodinga wire, futhi kudingeke ukuba uqale sokuprakthiza a imbobo esivalweni.
yokuxhuma ngokucophelela zonke izinto ndawonye, sithola nice "entendeni engadini". Ukuze kuqiniswe "isihlahla", sebenzisa kubhavu noma ebhodweni, uthele kuwo umhlaba, isihlabathi noma amatshe. Kumi esiqongweni sezindawo "intende yesandla" Ungabeka kwengane ithoyizi-inkawu. Ukuze wakhe kwaba hhayi kuyisicefe, ungase futhi hang ubhanana yokufakelwa.
Ukuze jikelele plastic "intende yesandla" ingasetshenziswa ezinhlanu litre amabhodlela. Nokho, faka umbala, kuzoba oluhlaza, kodwa isifiso "isihlahla" kungenziwa zaveza. Ukuze "intende yesandla" ibhodlela ngezandla zakhe akazange ame yedwa, eduze plastic isitshalo "zimbali" futhi "izilwane", wenza kusukela ezimoto. Ngakho siyokwazi ukuhlobisa egcekeni lakho bese usebenzisa kudoti kulahliwe.
Ukuzifihla "Bear": indlela ukwenza ngokurhaba kumaminithi
Indlela ukwandisa isikhathi round e CS: GO? indlela 2
Iqhawe Lyrical - ubeqhakambisa umlobi?
Amakhasi zomlando: Akimov Theatre Petersburg
Amaqembu izitshalo kutshalwa. Izibonelo izitshalo kutshalwa lwamagama